Ko Online Yakabhadharwa Survey A Scam? - TMC App
Ko Online Yakabhadharwa Survey I Scam?
Kune huwandu hwemawebhusaiti ekuongorora pamhepo uye haasi ese anovimbika, kana wangowana bhizinesi rakanaka rinoremekedzeka, zvichave nyore kuita mari online kubva kuongororo. Zvidzidzo zviri kukurumidza kuita nzira inotyisa yekuti vanhu vaite mari nekukurumidza, nekungopa maonero avo echokwadi.
Vazhinji vakapokana kuti zvidzidzo zvakabhadharwa kutambisa nguva, asi wakamboona here vaongorori vane ruzivo pakati pevatsoropodzi? Ndizvozvo, nekuti vane ruzivo rwekuita ongororo yepamhepo vanofara nezvavanogona kuita neongororo dzakabhadharwa, uye vari kuita zvavakaronga kuita- kuita mari.
Iwe unofanirwa kuve usina rusaruro, unochinja-chinja, unochinja-chinja uye uine chishuwo kuti uteedzere inobudirira basa repamhepo senyanzvi yepamhepo kudzidza inotora. Kana iwe uchinge watanga uye kutanga kuita mari, unopedzisira wava fan wekuita mari yemaonero ako. Zvadaro, iwe unowedzera mahorizoni ebasa rako repamhepo nekuzopedzisira wave mutengi wakavanzika, munyori akazvimirira kune rimwe basa repamhepo, mugadziri akazvimirira, kana chero chimwe chaunonzwa kuda! Iko hakuna hutsotsi uko kutora zvidzidzo zvepamhepo kunobatanidzwa. Dzimwe nguva zvidzidzo zvakabhadharwa zvinowanzova kutanga. Vazhinji vakatanga paInternet nekuve vanobhadhara ongororo, uye ikozvino vanofara mamaneja emasevhisi avo uye, kupfuura zvese, vatenzi venguva yavo, nzvimbo uye hupenyu.
Kiyi yekubhadharwa pakutora zvidzidzo zvepamhepo kusaina nemawebhusaiti akawanda eongororo yepamhepo sezvinobvira. Chikonzero chiri chekuti mawebhusaiti mazhinji anongotumira zvidzidzo zvishoma kwauri mwedzi wega wega kunyangwe izvi zvichisiyana kubva kune webhusaiti kuenda kune saiti. Pane mari inodarika mazana mashanu emari yekufunda mawebhusaiti painternet pachiyero ichocho uye miniti iri kukura nguva dzose, iyo inotungamira makumi mashanu yeiyi inokutumira iwe ongororo nguva nenguva asi kubva kune vamwe iwe unogona kugamuchira akati wandei ongororo pamwedzi kana zvakadaro.
Kunze kwekutora zvidzidzo, mamwe mawebhusaiti akapihwa anokupa iwe mukana wekupinda mu online kana offline ekutarisa mapoka. Focus groups iboka revanhu vakagara panzvimbo vachiita nhaurirano pamusoro pechimwe chinhu kana sevhisi; mapoka ekutarisa anowanzo kupa bhenefiti yakakura pane kutora zvidzidzo online.
Kana iwe uchitsvaga muhoro wenguva yakazara online, inopedzerwa kuongororo inogona kunge isiri iyo yakakosha zvinhu kwauri. Kunyangwe iwe uchigona kuita imwe mari hombe uchitora yakabhadharwa ongororo pamhepo, zvinodarika zvingangove zvisingakwani kukuita iwe kuwanda asi zvirinani kusabirwa uye uchashandiswa pane zvese zvaunoedza. Kune rimwe divi, kana iwe uchida kuita imwe mari pasina kushanda nesimba saka mari yezvidzidzo ndiyo nzira yekuenda nayo.
Vazhinji vakapokana kuti ongororo dzakabhadharwa kutambisa nguva, zvisinei iwe wakamboona chero vane ruzivo vanotora zvidzidzo pakati pevatsoropodzi? Ndizvozvo, nekuda kwekuti vane ruzivo vekudzidza pamhepo vanonakidzwa nezvavanogona kuita nezvidzidzo zvakabhadharwa, uye vari kuita izvo zvavanoda kuita- kuita mari. Chakavanzika chekubhadharwa pakutora zvidzidzo zvepamhepo kujoinha akawanda emawebhusaiti eongororo yepamhepo sezvinobvira. Pane mari inodarika mazana mashanu emari yemawebhusaiti ekuongorora pawebhu pachiyero ichocho uye miniti iri kukura nguva dzose, iyo inotungamira makumi mashanu yeiyi inokutumira iwe ongororo kazhinji asi kubva kune vamwe iwe unogona kugamuchira dzinoverengeka ongororo mwedzi wega wega kana zvakadaro.